तपाईंको भिडियोलाई Google र YouTube मा स्तरमा राख्न - Semalt सल्लाहहरू
तपाईंको वेबसाइटमा भिडियोहरू राख्नु राम्रो विचार हो। दिनहरू भयो जहाँ वेब सामग्रीहरू तपाईंको वेबसाइटमा केवल लेख लेखिएको थियो। हामी अब सल्लाह दिन्छौं कि वेबसाइटहरूले सामग्रीका अन्य प्रकारहरू समावेश गर्दछ जस्तै भिडियो र छविहरू। तपाईंको वेबसाइटमा यी फरक सामग्री प्रकारले तपाईंलाई धेरै फ्रन्टहरूमा न केवल अप्टिमाइज गर्न अनुमति दिन्छ तर तपाईंको दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्न पनि दिन्छ। छविहरू रुचाउने आगन्तुकहरूले केहि गर्न सम्बन्धित फेला पार्नेछन्। जसले भिडियो प्राथमिकता दिन्छ उसले हेर्नको लागि जोडी भेट्टाउन सक्छ। र पाठकहरू पढ्न सक्छन्।
आज, हामी कसरी गुगलको खोज इञ्जिन र युट्यूबमा तपाईलाई दर्जा प्राप्त गर्ने बारे छलफल गर्नेछौं। यी कुञ्जी अप्टिमाइजेसन इशाराहरूले तपाईंलाई YouTube र गुगल खोजीमा सिर्जना गर्ने समय र प्रयास खर्च गर्ने भिडियोहरूलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ।
के तपाईले गुगलमा केहि खोज्नु भएको छ, र तपाईले देख्नु भएको पहिलो प्रतिक्रियाले तपाईलाई यूट्यूबमा दर्शाउँछ? यो कसरी शक्तिशाली भिडियो अप्टिमाइजेसन हुन सक्छ। विशिष्ट गुगल खोज ईन्जिनको अलावा, यूट्यूब अर्को ठूलो खोज इञ्जिन हो। धेरै पटक, यस तथ्यले धेरै ब्रान्डहरू समावेश गर्दछ। तिनीहरू सबै सोच्छन् लेख लेख लेख। उनीहरूले युट्यूबमा दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न भिडियो सिर्जना गर्ने सम्भावनाहरू विचार गर्न कहिले छोड्दैनन्।
सिस्कोका अनुसार २०२२ सम्ममा सबै ग्राहक इन्टरनेटको 82२% भन्दा बढी अनलाइन भिडियोका कारण हुनेछन्। औसतमा, व्यक्ति हप्तामा १ 16 घण्टा भिडियो अनलाइन हेर्नका लागि खर्च गर्छन्। आज, विश्वभरका करिब 85 85% व्यवसायहरूले भिडियोहरूलाई मार्केटिंग उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सुरू गर्यो।
अब, के तपाईंले देख्नुभयो कि भिडियोहरू किन एक आवश्यक च्यानल हुँदैछ?
यदि तपाईं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बजारमा बाँच्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि भिडियोहरू प्रकाशित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र यो केवल तपाइँको वेबसाइटमा होइन तर युट्यूबमा पनि हो। हामीले हाम्रा भिडियोहरू असफल भएको देख्न वा अड्किने डरको सामना गर्नुपर्छ। सत्य यो हो कि लगभग हरेक ब्रान्डले यसको भिडियो सामग्री आजको जत्तिको आश्चर्यजनक हुनु अघि यसको अवरोधहरूको उचित साझेदारीको सामना गर्नेछ। यसलाई सही हुन समय र अभ्यास चाहिन्छ। तपाइँको भिडियो र सामग्री रैंकिंग लगभग समान प्रक्रिया हो। यसलाई व्यावसायिक मद्दत, समय, र धैर्यता आवश्यक पर्दछ। यो प्रक्रियाको एक भाग मात्र हो।
के तपाईंले भिडियोहरू पहिले नै प्रकाशित गर्नुभएको छ र तिनीहरूलाई स्तर निर्धारण गर्ने उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। Semalt तपाइँले हाम्रा भिडियोहरू दुबै यूट्यूब र अन्य खोज इञ्जिनहरूमा र्याक गर्न कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखाउँदैछ।
किन यो महत्त्वपूर्ण छ? तपाइँका भिडियोहरूको प्रगति देख्न मात्रै गाह्रो छ कि उनीहरूसँग 10 वा 15 दृश्यहरू छन्। यी विचारहरू वास्तवमा साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरूबाट हुन् जुन तपाईंले लिंक पठाउनुभयो। तपाईंले ती दृश्यहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा माथि लिन आवश्यक छ। यदि तपाईंले अत्यन्त आश्चर्यजनक भिडियोहरू सिर्जना गर्नुभयो भने, तिनीहरू तपाईंको कल्पनाको मूर्ति नै रहन्छन् यदि कोहीले उनीहरूलाई देख्दैन भने।
यूट्यूब इन्टर्नेट भिडियोको प्राथमिक पुस्तकालय हो, हामी तिनीहरूलाई हाम्रो लक्षित प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने छौं। यद्यपि यस लेखमा दिइएका सुझावहरूले तपाईंलाई गुगलमा र अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा र rank्क गर्न मद्दत गर्दछ।
म कसरी यूट्यूबमा मेरो भिडियो श्रेणी दिन सक्छ?
यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, विशेष गरी व्यक्ति वा कम्पनीहरूले उनीहरूको श्रोताको पहुँच बढावा दिन खोजिरहेका छन्। यहाँ केही सुझावहरू छन् जुन हामी तपाईंको भिडियोहरूको मार्केटि। प्रदर्शन सुधार्न प्रयोग गर्दछौं।
â € quality गुणवत्ता सामग्री उत्पादन गर्नुहोस्
यद्यपि अप्टिमाइजेसन बिना गुणस्तरीय सामग्री भिडियोहरू अर्थहीन छ, गरीब गुणवत्ता भिडियोहरू अनुकूलन गर्न पनि यो बेकम्मा छ। तपाइँको भिडियोहरू दृष्य प्राप्त गर्नका लागि तपाइँलाई सख्त रूपमा चाहिन्छ, तपाइँसँग अद्भुत सामग्री हुनु आवश्यक छ। धेरै कारकहरू गुगलमा भिडियोलाई दर्ता गर्न हाम्रो प्रयासमा एक साथ आएका छन्। यद्यपि क्वालिटीले सम्पूर्ण प्रक्रियाको आधार बनाउँदछ।
भिडियोको गुणस्तरले तपाईंको भिडियोको स्तरलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन किनभने त्यहाँ क्वालिटी मापन गर्न कुनै उद्देश्य उद्देश्यहरू छैनन्। जे होस्, यसले दर्शकहरूको सन्तुष्टि र संलग्नतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फ प्रयोगकर्ताहरूको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण र ranking्कि factor फ्याक्टर हो।
तपाइँ थप भिडियोहरू हेर्न, मनपराउन, टिप्पणी गर्न, र तपाइँका भिडियोहरू साझा गर्न चाहानुहुन्छ। जति अधिक तिनीहरूले यी गर्छन्, तपाईंको भिडियो YouTube मा उत्तम छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो भिडियोहरू स्पष्ट उद्देश्यका साथ बनाउनु हुन्छ। तपाईंको भिडियो एक विशेष समस्या हल गर्न वा तपाईंको दर्शकहरूको लागि विशिष्ट जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
तपाइँका भिडियोहरू सक्षम हुनुपर्दछ:
ज्ञान साझा गर्नुहोस्
तपाइँको श्रोतालाई सिकाउनुहोस्
वा तिनीहरूलाई रुचि भएको कुराको विश्लेषण दिनुहोस्।
अन्तमा, तपाइँका भिडियोहरू सँधै उपयोगी र स be्लग्न हुनुपर्दछ।
तपाईंको भिडियोहरू सिर्जना गर्दा, तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई तपाईंको च्यानलको सदस्यता लिन, टिप्पणी गर्न, मनपर्न, र साझा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
गुणस्तरीय भिडियो सामग्री उत्पादन गर्दा, कुञ्जी खोज अनुसन्धान गर्नु पनि बुद्धिमानी हुन्छ। यसले तपाईंको लक्षित दर्शकहरू को हुन् र उनीहरू तपाईंको भिडियोमा हेर्न वा सुन्न चाहन्छन् भनेर देखाउँछ। यस तरिकाले, तपाईं सामग्री सिर्जना गर्नुहुन्न जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको रुचि आकर्षित गर्दैन।
तपाइँका भिडियोहरू अनुकूलित गर्दै
यो जहाँ तपाइँ सक्रिय रूप मा तपाइँको भिडियो पत्ता लगाउन को लागी प्रयासहरु मा राख्न शुरू। जब हामी तपाईंको भिडियोहरू अनुकूलित गर्ने बारेमा कुरा गर्छौं, हामी दुई प्रमुख क्षेत्रहरू सन्दर्भ गर्दैछौं, जस्तै भिडियो आफैं र त्यो भिडियो प्रकाशित भएको युट्यूबमा रहेको पृष्ठ।
YouTube मा तपाईंको भिडियो क्रमबद्ध गर्दा तपाईंले कुन कारकहरू विचार गर्न आवश्यक छ?
यो साधारण धारणा हो कि आकारले केही फरक पार्दैन। खैर, यो सत्य होइन। तपाईंको भिडियोको आकारले फरक पार्छ। होईन, हामी तपाईंको भिडियोको परिभाषामा होइन तर त्यसको लम्बाइलाई जनाउँदैछौं। अधिक विस्तृत भिडियो दिने निर्णय वैकल्पिक हो। हामी केवल सल्लाह दिन्छौं कि तपाईंसँग एक व्यापक भिडियो छ किनकि उनीहरू तपाईंको दर्शकका प्रश्नहरूको जवाफ पूर्ण रूपमा उत्तर दिन कोठा दिन्छन्।
त्यसो गरेर, तपाईंको दर्शकहरू अधिक सन्तुष्ट महसुस गर्दछन्, जसले उनीहरूलाई अन्त, अन्त सम्म भिडियो मनपराउन, साझा गर्न, टिप्पणी गर्न, र छडी राख्नको लागि उनीहरूलाई सजिलो बनाउँदछ।
पहिले, हामीले यसको सामग्रीको सम्बन्धमा भिडियोको गुणवत्ताको बारेमा कुरा गर्‍यौं। यहाँ हामी भिडियोको गुणस्तरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। आज, YouTube को गृह पृष्ठमा भिडियोहरूको लगभग .2 68.२% HD मा छन्। एक व्यक्ति को रूप मा, हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईं एक भिडियो हेर्दा उत्तम गुण प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। HD मा तपाइँको भिडियोहरू राख्नु अझ सन्तोषजनक दृश्य हुन्छ र तपाइँको सगाईको सम्भावना बढ्छ।
सामान्यतया, तपाईले एचडी भिडियोहरू बनाउँदा आश्चर्यजनक सामग्री सिर्जना गर्न अझ मेहनत पनि गर्नुहुनेछ। त्यो किनभने HD भिडियो सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको उपकरण एक लगानी हो। नतिजा स्वरूप, सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले उनीहरूको लगानीमा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्न को लागी सबै प्रयास गरे।
तपाईंको भिडियो को माध्यमबाट कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं सोचिरहनुभएको हुन सक्छ कि गुगलले तपाईंको भिडियोहरूमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू बुझ्दैन वा बुझ्दैन। हामी यति लापरवाह हुन चाहँदैनौं। यदि त्यहाँ हामीले महसुस गरेको एक चीज छ भने, यो यो हो कि गुगल अविश्वसनीय बुद्धिमान छ। गुगलले आफ्नो मेशिन शिक्षा क्षमतालाई धेरै मानेमा द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। हामी अब जान्दछौं कि गुगलको एल्गोरिथ्मले एक पटक अपलोड भएको भिडियोहरूबाट अडियो निकाल्दछ। अडियो त्यसपछि पाठमा ट्रान्सक्रिप्ट हुन्छ, जुन गुगल द्वारा पढ्न सकिन्छ।
तिनीहरूका एआई को अन्य प्रयोगको आधारमा, हामीले गुगलले यी ट्रान्स्क्रिप्शनहरू रैंकिंग भिडियोमा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यो पनि सम्भव छ कि तिनीहरूले प्रासंगिक दृष्टिकोणबाट प्रस analy्गहरू विश्लेषण गरे।
अन्तमा, यदि हामी यो विश्वास गर्न चाहन्छौं कि कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगले सी ranking्गमा कुनै सीधा प्रभाव पार्दैन, कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग अझै ट्रान्सक्रिप्ट गर्न चाहने दर्शकहरूको लागि महत्वपूर्ण छ। अर्को फाइदा यो हो कि भिडियोमा टिप्पणी गर्दा, दर्शकहरूले भिडियोमा उल्लेखित कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्न छिटो गर्नेछन्। यो धेरै उपयोगी हुनेछ किनकि केही दर्शकहरूले भिडियो हेर्नु अघि टिप्पणीहरूमा जाँच गर्न रुचाउँछन्।
ट्यागहरूले YouTube मा भिडियोको क्रममा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन। जहाँसम्म, तिनीहरूले सुझाव भिडियोको रूपमा तपाईंको भिडियो सुविधाको साथ मद्दत गर्न सक्दछन्। यसले तपाईंको भिडियोको संलग्नतामा असर गर्छ किनभने YouTube को एल्गोरिथ्मले तपाईंको भिडियो दर्शकहरूलाई सुझाव दिईन्छ जो त्यस्तै केही हेरेका छन्।
गुगलका लागि तपाईंको भिडियोहरू अप्टिमाइज गर्ने बेलामा तपाईंले विचार गर्नु पर्दछ
युट्यूबका लागि अप्टिमाइजेसन इशाराहरूले पहिले नै फाउन्डेसन गठन गरिसकेका छन् जसका लागि तपाईंले गुगल खोजीमा स्तर निर्धारण गर्नु पर्छ। तर ती चरणहरू पर्याप्त छैनन्। यहाँ केहि अन्य कारकहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ:
श्रेणीकरण गर्न, तपाईंलाई अर्को आधिकारिक वेबसाइटबाट लिंकहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईं हाम्रो धेरै लेखहरूमा लिंकहरू कसरी निर्माण गर्ने भनेर जान्न सक्नुहुनेछ। यहाँ के महत्त्वपूर्ण छ त्यो तपाइँको एch्कर पाठ मिल्छ वा भिडियो शीर्षकसँग नजिकको समानता राख्दछ। तपाईले अधिक अप्टिमाइजेसनको बारेमा पनि चिन्ता लिनु हुँदैन किनभने तपाई सिधा गुगल सम्पत्तीमा लि l्क हुनुहुन्छ।
धेरै प्रयोगकर्ता गतिविधि को महत्व को बारे मा सचेत छन्, विशेष गरी युट्यूबमा। गुगलमा, तथापि, यो केहि अनावश्यक छ। खोज परिणामहरूको सment्लग्नता जुन भिडियोले SERP मा कत्तिको राम्ररी प्रभाव पार्छ भनेर प्रभाव पार्छ। यो किनभने गुगलले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफूले खोजिरहेको कुरा दिन चाहान्छ, र उच्च सment्लग्नताको दरको मतलब तपाईंको भिडियोले उनीहरूलाई त्यसो गर्न मद्दत गर्दछ। किनकि तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंलाई हराउन भरसक प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसकारण यो बुद्धिमानी हो कि तपाईंले आफ्नो संलग्नता दरहरू सुधार गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ।
यस जानकारीको साथ, तपाइँका भिडियोहरू स्काईरोकेटमा बाध्य छन्, तर किन यहाँ रोकिन्छ? सबै संकेतहरूबाट, तपाईंलाई हाम्रा सेवाहरू आवश्यक छन्, हामी तपाईंलाई YouTube गृह पृष्ठमा अनुग्रह दिन मद्दत गर्न सक्दछौं। हो, यो सम्भव छ। त्यसोभए तपाईं किन हामीलाई आज सन्देश पठाउनुहुन्न र हामी सँगै विश्वमा तपाईंको भिडियो (हरू) देखाउनुहोस्?